सेक्सनहरू पाठको खण्डहरू नाम दिइन्छ, ग्राफिक्स वा वस्तुहरू समावेश गर्दा, जुन तपाईँ तरीकाहरूको सङ्ख्यामा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
सम्पादन हुनबाट पाठलाई बचाउन.
पाठलाई देखाउन वा लुकाउन.
अन्य LibreOffice कागजातहरूबाट पाठ र ग्राफिक्स फेरि प्रयोग गर्नका लागि.
पाठको सेक्सनहरू घुसाउनका लागि जुनले हालको पृष्ठ शैली भन्दा बिभिन्न स्तम्भ सजावट प्रयोग गर्दछ.
सेक्सनले कम्तिमा एउटा अनुच्छेद समावेश गर्दछ. जब तपाईँ पाठ चयन गर्नुहुन्छ र सेक्सन सिर्जना गर्नुहुन्छ, अनुच्छेद बिच्छेद स्वत: पाठको अन्त्यमा घुसाइन्छ.
तपाईँ पाठ कागजातबाट सेक्सनहरू घुसाउन सक्नुहुन्छ, अन्य पाठ कागजातको सेक्सनको रूपमा सम्पूर्ण पाठ कागजात. तपाईँ पाठ कागजातबाट सेक्सनहरू पनि घुसाउन सक्नुहुन्छ लिङ्कहरूको रूपमा अर्को पाठ कागजातमा, वा उही कागजातमा.
नयाँ अनुच्छेद तुरुन्त सेक्सन अघि वा पछि घुसाउनका लागि, सेक्सनको अगाडि वा पछाडि क्लिक गर्नुहोस्, र विकल्प Alt+Enterथिच्नुहोस्.
सेक्सनहरू र स्तम्भहरू
तपाईँ हट्दै गरेको सेक्सनमा सेक्सनहरू घुसाउन सक्नुहुन्छ. उदाहरणका लागि, तपाईँ सेक्सनमा दुई स्तम्भ सहितको सेक्सन घुसाउन सक्नुहुन्छ जुनले एक स्तम्भ समावेश गर्दछ.
सेक्सन सजावट, उदाहरणका लागि स्तम्भहरूको सङ्ख्यामा, जो सँग पृष्ठ सजावट माथि प्राथमिकता छ जुन पृष्ठ शैलीमा परिभाषित गरिएको थियो.
Title is: सेक्सनहरू प्रयोग गर्दा